Madaxweynaha Galmudug & taliyaha booliska Soomaaliya oo kulan xasaasi ah yeeshay | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxweynaha Galmudug & taliyaha booliska Soomaaliya oo kulan xasaasi ah yeeshay
Madaxweynaha Galmudug & taliyaha booliska Soomaaliya oo kulan xasaasi ah yeeshay
Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa gaaray wafdi saraakiil ah oo uu hggaaminayo taliyaha Ciidamada booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, iyada oo siwyen halkaasi loogu soo dhaweeyay.
Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin sar sare oo ka tirsan maamulka Galmudug, saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda ee ku sugan halkaas iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweynha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay Taliya Ciidanka Booliska Soomaliya Jeneraal Xijaar waxaana ay iska xog-wareysteen dib u habeyn dhawaan lagu sameyn doono ciidamada booliska Soomaaliya ee ka howlgalla degaannada Galmudug.
Sidoo kale labada dhinac ayaa waxaa ay ka wada hadleen sugida amniga ee degaannada Galmudug gaar ahaan Goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka labada Aqal iyo dardar gelinta howlgallada ka dhanka ah Al Shabaab.
Jeneraal Xijaar ayaa la filayaa in uu booqasho iyo kormeer ku tago Saldhigyada ciidamada booliska Soomaaliya ku leeyihiin degaannada Galmudug si isbedel iyo tayeyn loogu sameeyo.